MALUNGA NE-US-Square Technology Group Co., Ltd.
Umgangatho, ukuTsha, iNkonzo
Umboneleli wesisombululo esingumkhenkce ongcono!
UKUTHENGISA AMAZWE NEMIMANDLA
Mnu Huang Jie
I-Square Technology Group Co., Ltd. (emva koku ebizwa ngokuba yiNantong Square) yasekwa nguMnu Huang Jie ngo-1986. Ishishini lokuvelisa izixhobo zokubanda elikhokelayo elinezibonelelo ezibanzi. Inkampani ibekwe kwisiXeko saseNantong, kwiPhondo laseJiangsu. Ngaphezulu kweminyaka engama-30 yokuqatshelwa kwabathengi kunye nefuthe kwintengiso, "iNantong Square" iye yaba yinkampani yezixhobo ezibandayo ezikhawulezayo zasekhaya.
INantong Freezing Equipment Co yasekwa ngonyaka ka-1986
Imveliso yokuqala- Qhagamshelana nesitya sefriji ngenkqubo yefriji yenziwa ngonyaka we-1987.
Isikhenkcezisi sokuqala sokuphindaphindwa kabini saphuhliswa ngonyaka we-1994.
Isikhenkcezisi seplate sathunyelwa kuqala kwimarike yaseThailand ngonyaka we-1995.
INantong Square Freezing & Heating Mechanical Equipment Co, Ltd yasekwa njengenkampani edibeneyo ngonyaka we-2003.
Isicelo se-IPO ngonyaka wama-2012.
Inkampani idweliswe kwiA Shares eShanghai Stock Exchange ngoMeyi, ngo-2016
Inkampani ibizwa ngokuba yi "Square Technology Group Co, Ltd", ineenkampani ezi-5 ezixhasayo.
Itekhnoloji yesikwere isebenzisa iqela elikhethekileyo lophuhliso eligxile kwitekhnoloji yokukhenkcisa ngokukhawuleza. La malungu eqela ziingcali kubunjineli befriji, ubunjineli bokutya, uyilo loomatshini, kunye nemveliso. Sigcina intsebenziswano yobuchwephesha kunye neenkampani ezininzi zangaphandle, ezinje ngeMayekawa WFG. Co eJapan kunye neIntralox Inkampani eMelika. Ukongeza, inkampani yethu iphumelele isiqinisekiso se-CE, i-PED, kunye ne-ASME. Sithathe inxaxheba ekwenziweni kwezindululo zemigangatho yamanye amazwe kwaye sibambe amalungelo awodwa omenzi wechiza.
Indawo yokuveliswa kweTekhnoloji inezixhobo zokuqhubekeka phambili, ezinje ngamaziko okusika e-laser ngokuzenzekelayo, oomatshini bokulawula ngenqindi, imigca yemveliso yentsimbi engenisiweyo, imigca yokuvelisa iphaneli, izixhobo zonyango lomphezulu wesinyithi njalo njalo. Kwangaxeshanye, Square Technology ngokuzimeleyo iphuhlise imigca yemveliso ye-evaporators yethu, inkqubo yeplate, izixhobo zokugquma amagwebu, umatshini wokuzenzekelayo we-welding njalo njalo. Uninzi lwezixhobo zokubanda zetyathanga ziyilelwe ngokuzimeleyo kwaye zenziwe ngeTekhnoloji ye Square.
Akuvumelekanga © I-Square Technology Group Co., Ltd. ICP: 11073309 号 -1 Izaziso zomthetho Inkcazo: ICP 11073309 号 -1